DOWNLOAD MPAMILY HO AN'NY ASUS X502CA - MPAMILY - 2019
Mitadiava sy manapaha rindrambaiko ho an'ny ASUS X502CA
Ny fitaovana finday maoderina dia somary lava loatra, ary matetika ny mpampiasa dia miatrika ny filàna handefasana angona amin'ny fitaovana vaovao. Izany dia azo atao haingana sy amin'ny fomba maro.
Ampidino ny angona avy amin'ny Android ho an'ny hafa
Ny tsy maintsy hifindrana amin'ny fitaovana vaovao misy Android OS dia tsy mahazatra. Ny tena zava-dehibe dia ny mitahiry ny fahamarinan'ny rakitra rehetra. Raha te handefa vaovao amin'ny fifandraisana ianao, dia vakio ity lahatsoratra manaraka ity:
Lesona: Ahoana no handefasana fifandraisana amin'ny fitaovana vaovao amin'ny Android
Fomba 1: Google Account
Iray amin'ireo safidy manerantany ho an'ny famindrana sy fiasa amin'ny angon-drakitra amin'ny fitaovana rehetra. Ny votoatin'ny fampiasana azy dia ny mampifandray ny kaonty Google amin'izao fotoana izao amin'ny finday vaovao (matetika takiana rehefa miverina aloha ianao). Aorian'izany, ny fampahalalam-baovao manokana (naoty, fifandraisana, taratasin-tadidy) dia hovana miaraka. Mba hanombohana ny famindrana ny rakitra tsirairay dia mila mampiasa Google Drive ianao (tokony hapetraka amin'ny fitaovana roa).
Afaho ny Google Drive
Sokafy ny fampiharana ao amin'ny fitaovana ahafahana mandefa vaovao ary tsindrio ny sary «+» ao amin'ny zoro ambany farany amin'ny efijery.
Soraty ao amin'ny lisitra misokatra ny bokotra "Download".
Aorian'izany, ny fidirana amin'ny fahatsiarovan'ny fitaovana dia homena. Tadiavo ny antontan-taratasy mila ampidirina ary apetaho amin'ny marika izy ireo. Aorian'io kitika io "Open" manomboka mandefa ny solosaina.
Sokafy ny fampiharana amin'ny fitaovana vaovao (izay handefasana anao). Ireo zavatra efa voafaritra dia hiseho eo amin'ny lisitry ny misy (raha tsy misy azy ireo izany, midika izany fa misy hadisoana mandritra ny famerenana ary ny dingana teo aloha dia mila averimberina indray). Tsindrio izy ireo ary fidio ilay bokotra. "Download" ao amin'ny sakafo izay miseho.
Ny rakitra vaovao dia ho voatahiry ao amin'ny fahatsiarovana ny smartphone ary azo alaina amin'ny fotoana rehetra.
Ankoatra ny fiaraha-miasa amin'ny antontan-taratasin'olona, ​​Google Drive dia mamonjy rafitra ho an'ny rafitra (amin'ny Android madio), ary mety ho azo ampiasaina raha manana olana OS ianao. Azo ampiasaina ho an'ny orinasa mpamokatra rindrambaiko ihany koa io asa io. Misy famaritana amin'ny antsipiriany momba io endri-javatra io dia omena amin'ny lahatsoratra iray hafa:
Vakio bebe kokoa: Ahoana no hamerenana Android
Aza adino koa ny fangatahana napetraka teo aloha. Mba hahafahanao mametraka azy ireo amin'ny fitaovana vaovao dia tokony hifandray amin'ny Play Market ianao. Mandehana any amin'ny fizarana "Ny fangatahana nataoko"amin'ny alalànao ny bokotra ary tsindrio ny bokotra "Download" mifanohitra amin'ireo fangatahana takiana. Ny safidy rehetra natao teo aloha dia hovonjena.
Miaraka amin'ny Google Photos, azonao atao ny mamerina mamerina ny sary nalaina teo aloha teo amin'ny fitaovana taloha. Ny dingan'ny famonjena dia mivadika (raha manana Internet ianao).
Handefa Google Photos
Fomba 2: Cloud Services
Io fomba io dia mitovy amin'ny teo aloha, saingy ny mpampiasa dia tsy maintsy misafidy ny loharano sahaza ary mamindra ny rakitra. Mety ho Dropbox, Yandex.Disk, Mail.ru Cloud ary programa malaza hafa.
Ny fitsipiky ny asa amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia mitovy. Hevero fa iray amin'izy ireo, Dropbox, dia tokony ho misaraka.
Afeno ny app Dropbox
Raiso ity ary ampidiro ny programa amin'ny rohy etsy ambony, ary hazavao.
Amin'ny fampiasana voalohany dia mila miditra ianao. Misy kaonty Google misy anao amin'izany, na afaka misoratra anarana ianao. Amin'ny hoavy, afaka mampiasa kaonty misy anao ianao amin'ny alalan'ny fanindriana fotsiny ny bokotra. "Login" ary miditra anarana sy tenimiafina.
Ao amin'ny varavarankely misokatra, azonao ampidirina ny rakitra vaovao amin'ny fipihana eo amin'ny sary etsy ambany.
Fantenao ny asa ilaina (mampiditra sary sy horonan-tsary, rakitra, na mamorona ordinatera amin'ny disk).
Rehefa mifidy boot iray dia haseho ny fahatsiarovana ny fitaovana. Tadiavo ny tahiry ilaina mba hanampy amin'ny tahiry.
Aorian'io, midira ao amin'ny programa ao amin'ny fitaovana vaovao ary tsindrio ny icône eo ankavanan'ny anaran'ny rakitra.
Ao amin'ny lisitra miseho, mifidiana "Vonjeo amin'ny fitaovana" ary miandry ny fampiharana hamita.
Fomba 3: Bluetooth
Raha te handefa rakitra amin'ny findainao taloha ianao, izay tsy ahafahanao manatsotra ny asa rehetra voatanisa etsy ambony, dia tokony hifantoka amin'ny asa an-trano ianao. Ampiasao ny Bluetooth:
Manaova hetsika amin'ny fitaovana roa.
Aorian'io, mampiasa ny finday taloha, mandehana any amin'ny antontan-taratasy ilaina ary tsindrio ny sary "Alefaso".
Soraty ao anatin'ny lisitr'ireo fomba fitsaboana «Bluetooth».
Aorian'io, mila mamaritra ny fitaovana izay handefasana ireo rakitra.
Raha vao vita ny asa atao, dia alao ny fitaovana vaovao ary manamarina ny famindrana ny rakitra ao amin'ny varavarankely. Rehefa tapitra ilay fandidiana dia hiseho ao anatin'ny tsiaron'ny fitaovana ny singa voafantina rehetra.
Fomba 4: SD Card
Io fomba fanao io dia azo ampiasaina raha toa ka misy teboka mifanaraka amin'ny smartphones. Raha vao vaovao ny karatra dia ampidiro ao amin'ny fitaovana efa taloha ary alefao daholo ny rakitra rehetra. Azo atao izany amin'ny fampiasana ny bokotra "Alefaso"Izany dia voafaritr'ilay fomba teo aloha. Dia afindrao ary ampifandraiso amin'ilay karatra vaovao ilay karatra. Ho afaka izy ireo rehefa mifandray.
Fomba 5: PC
Safidy tsotra izany ary tsy mitaky vola fanampiny. Mba hampiasana azy dia ilaina ireto manaraka ireto:
Ampidino ireo fitaovana amin'ny PC. Amin'izany fotoana izany dia hisy hafatra havoakany amin'izy ireo, ka mila tsindrio ny bokotra "OK"Ilaina ny manome ny fidirana amin'ny rakitra.
Alefaso aloha ny smartphone taloha sy ny lisitry ny folders sy ny antontan-taratasy izay miseho, mitady izay ilainao.
Ampitao amin'ny ordinatera ao amin'ny fitaovana vaovao izy ireo.
Raha tsy afaka mampifandray ny fitaovana roa amin'ny solosaina avy hatrany ianao, dia alefanao aloha ny rakitra ho any amin'ny ordinatera ao amin'ny solosaina, ary ampiasao ny telefaona faharoa ary avereno alefa ao amin'ny fahatsiarovany.
Amin'ny fampiasana ireo fomba ambaranao etsy ambony, afaka miditra amin'ny Android ianao amin'ny iray hafa raha tsy mitaky fampahalalana manan-danja. Ny fomba fitsaboana dia atao haingana, nefa tsy mila ezaka be sy fahaiza-manao.